गित होस त यस्तो : तिजका गित नि कस्ता ? ड्रम ठटाउदै गिटार हल्लाउदै बिच छेउ कुना छत बारीको पाटा के के ! - Complete Nepali News Portal
गित होस त यस्तो : तिजका गित नि कस्ता ? ड्रम ठटाउदै गिटार हल्लाउदै बिच छेउ कुना छत बारीको पाटा के के !
काठमाण्डौ, हातमा हरिया चुरा, मेहेन्दी, गाउँघर, टोल छिमेकमा गाईने गित र बज्ने मादल, रेडियो टेलिभिजनहरुले बजाउने चेलीका वेदनाहरुले तिज आँगनीमा भित्रिन लागेको आभाष दिन्छन ।
श्रावण लागेसँगै तिजका गितहरु दिनहुँ जसो सार्वजानिक भईरहेका छन् । त्यस्तै गितहरुको भिडमा नेपाली लोक संगीतका धरोहर नारायण रायमाझीको शब्द संगीतमा ‘मै छोरी ढल्केर नाँचेको’ भन्ने बोलको तिज गित बजारमा आएको छ ।
शान्ति भट्टले एकल स्वर दिएको गितको भिडियो निर्देशन उदिराम खड्काले गर्नुभएको छ भने भिडियोमा बिन्दु खड्का, मिरा खड्का, प्रतिमा कँडेल लगायतका दिदि बाहिनीहरु नाँचेका छन् । भिडियोको कलरिङ एडिटिङ मिराज अर्यालले गर्नुभएको छ ।
हिन्दु नारीहरुले आफ्नो श्रीमानको आयु बढोस र अविवाहितले सुयोग्य वर पाउ भनेर तीजमा भगवान शिवको आराधना गरिनुका साथै नाचगान मनोरञ्जन समेत गर्ने प्रचलन छ ।
हिजो आज मोर्डन तिजको भिडमा हाम्रा आमा दिदीहरु ढल्की ढल्की नाँच्ने, लय हालेर गाउने लरी बिलरीका गितहरु बजारमा बिरलै भेटिन्छन । यसलाई एकथरी तिजमा आएको विकृति मान्छन भने अर्कोथरी तिजमा पनि आधुनिकता हुनुपर्छ । भद्दा आधुनिकताको नाममा परापुर्व काल देखि चलिआएको रितिथितिलाई तोडमोरोड गरी पश्चिमा संस्कृति भित्र्याएर नेपाली लोक संस्कृतिको कहाँ पुर्याउन खोजेका हुन त्यो त ति गीतका गायक सर्जकले नै जानुन !
संस्कृतिको जगेर्नाको हिसाबले हेर्ने हो भने डिस्को, बारहरुमा जस्तै ड्रमसेट ठटाउँदै गिटार हल्लाउदै बिच्च बिच्चमा, छेउ र कुनामा अझै नभएर घरको छतमा, बारीको पाटामा, यी गितले तिजको महत्व दर्साउदैनन । भड्किलो पप रक तिजको लय भित्र पर्दैन ।
राम्रो भन्दा नराम्रो कुरा छिट्टो फैलिने समाजमा त्यस्तै उटपट्याङ गितहरुकै बोलवाला भएपनि तिज पर्वको रक्षा जगेर्ना गर्नु लोक संस्कृतिलाई बचाई राख्नु हामी सबैको कर्तब्य हो ।